Cookies voaravaka ho an'ny premiere Triple Nine | Famoronana an-tserasera
Aaron Paul no protagonista lehibe hafa an'i ny andiam-pinoana Breaking Bad. Iray amin'ireo andiam-pahitalavitra tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra nilalaovan'ity mpilalao sarimihetsika Pinkman ity izay niaraka tamin'ny fiovana hafahafa sy lehibe teo amin'ny fiainan'i Walter White, tanterahina tamim-pahakingana nataon'i Bryan Cranston.
Raha manana an'i Paul manaraka ireo andalana ireo isika dia noho ny heviny momba misaotra miaraka amin'ny cookies efa voaravaka ho an'ny ekipan'ny mpilalao sy ny talen-tsekoly tamin'ireny herinandro nandraisana sary an-tsary ny première an'ilay sarimihetsika Triple 9 ireny izay ho hita tsy ho ela eo amin'ny sehatra lehibe. Ankoatra ny fananana an'i Aaron Paul ao amin'ny repertoire-ny mpilalao, dia misy an'i Kate Winslet, Norman Reedus (fantatra amin'ny anjara asany amin'ny The Walking Dead), Casey Affleck ary ilay Woody Harrelson lehibe fantatry ny rehetra.
Christine McConnell no miandraikitra ny fanaovana ireo mofomamy voaravaka ho an'ny fotoana anaovany sary ny lafiny tsirairay amin'ireo cookies matsiro ireo mpihetsiketsika ao amin'ny Triple Nine.
Nahazo alalana i McConnell maka fahalalahana kely noho ny iray hafaNa dia, araka ny nambarany, ny zavatra sarotra indrindra dia ny fanaovana ny sarin'ny tsirairay amin'ireo mpilalao sarimihetsika sy mpilalao sarimihetsika hita ao amin'ity sarimihetsika ity. Tsy mpaka sary nahay izy, namorona ny endrika tantara an-tsary izy mba hisolo tena ny tarehin-tsary tsirairay ao anatin'ilay sarimihetsika izay miaraka amina basy.
Araka ny hitanao dia mizara izahay ampahany amin'ny dingan'ny famoronana na ny sasany amin'ireo fitaovana sy fitaovana ampiasaina hamerenana ny endrik'ireo mpilalao sarimihetsika malaza ireo amin'ireo cookies matsiro ireo. Zavatra iray izay atokisan'ny mpanakanto tenany ary azo antoka fa handia fiainana na kibo tsara kokoa rehefa natolotr'i Aaron Paul tenany ho an'ny mpilalao an'io sarimihetsika io izay ny praiminisitra amin'ny 26 febroary any Etazonia.
Ianao dia manana ny instagram nataon'i McConnell. Raha mila sakafo bebe kokoa miaraka amin'ny fototra ianao, avy eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo cookies voaravaka nohafaran'i Aaron Paul ho an'ny premiere Triple Nine